Izidumi ezingu-17, ezifana nomunye, njengamaconsi amabili amanzi
Uma ukholwa izibalo, amawele cishe cishe wonke umuntu. Kubandakanya izinkanyezi phakathi kwabalingani babo be-stellar.
Uyakhumbula ukumangala kwakho lapho bekutshela ukuthi kuyi-Star Wars Padmé noPrincess Amidalu badlalwe nguKeira Knightley noNatalie Portman? (Usuvele utshele ngalokhu?) Futhi manje lungiselela ukumangala ngisho nakakhulu, ngoba uKira noNatalie akuzona kuphela abahlonishwayo bohlobo olufanayo!
1. Hilary Swank no Missy Peregrim
Ngokuqinisekile, akuzona amawele, kodwa angakwazi ukuthatha indawo eyodwa kwenye indawo.
2. Taylor Lautner noChris Humphries
Mhlawumbe uKim Kardashian uhlukanisile noChris Humphries lapho eqaphela ukuthi akayena uJakobe ovela "eTwilight"?
3. Katy Perry noZoe Deschanel
Ngicabanga ukuthi ukulinganisa kwamafilimu ne-Zoey Deschanel kwanda kanjani inkanyezi uKaty Perry evuliwe?
UBradley Cooper noRalph Fiennes
Cha, uBradley Cooper noRalph Fiennes bangumuntu oyedwa, kuphela nge-nose plasty ...
5. Ingabe uFerrell noThadi Smith bazoba khona
Futhi futhi kwadingeka uzibuze ukuthi kungani ku-Red Hot Chili Peppers amadrama adlala nguWill Ferrell?
6. UCindy Crawford no-Eva Mendes
UCindy Crawford no-Eva Mendes baze babe nama-moles cishe endaweni efanayo!
7. Ian Somerhalder noRob Lowe
Ngokuvamile, kunikezwe umehluko weminyaka eyishumi nesishiyagalolunye phakathi kukaRob Lowe no-Ian Somerholeder, iqiniso lokuthi abanye abadibanisa nabo bangabhekwa njengokwazisa kuRob owaziwa kakhulu.
8. Keira Knightley noNatalie Portman
O, lo mbhangqwana ovelele ...
9. UMilla Jovovich noLinda Evangelista
Ukulingana okungu-70% phakathi kukaMilla Jovovich noLinda Evangelists kuyiqiniso, ukubaluleka kokwenza izimonyo. Kodwa lezi 30% ...
UBill Murray noJames Belushi
UBill Murray, uJames Belushi ... futhi kancane kancane uTom Hanks.
11. UMelanie Griffith noMeg Ryan
Amadoda amaningi angaboni ngokucophelela umlingani ohlobo olufanayo - enezici ezifanayo, izitayela zezinwele. Kuyathakazelisa ukuthi u-Antonio Banderas ngemuva kokuhlukanisa noMelanie Griffith usevele eqala ukubheka iMeg Ryan?
12. UCameron Diaz no-Helena Christensen
Konke mayelana nalezi ezingenasici.
13. UJamie Pressley noMargot Robbie
Ucabanga ukuthi uJamie Pressley uzodla kaningi kangakanani ukuthi akayidlala i-Harley Quinn "e-Suicide Squad"?
14. UGarik Kharlamov noMat Damon
Uma ibhizinisi lika-Matt eHollywood lihamba kabi, uyohlale ekwazi ukufunda isiRussia futhi ahambe nemidlalo yamahlaya emadolobheni wesifundazwe emazweni angaphambili e-CIS!
UKim Kardashian noNicole Scherzinger
Cha, uKim Kardashian akakwazi ukudideka nomunye umuntu. Kodwa futhi ukuphikisana nalokho okufana nalokho okufana noNicole Scherzinger, akuyona into enengqondo.
UMarion Cotillard noMila Kunis
Owesifazane ongumFulentshi ohlanzekile uMarion Cotillard kumelwe ukuba wayejabule, ukuthi ulahliwe iminyaka engu-7, edideka uMila Kunis.
17. Tim Roth no-Abramovich waseRoma
Kubonakala sengathi ngiyazi ukuthi ngubani ozodlala i-Roman Abramovich, uma ngabe ifilimu yenziwa ngaye! Futhi njengoba iRoma ihamba kakhulu futhi ingena emibuthanweni ephakeme yomphakathi, kungenzeka ukuthi yena noTim Roth sebevumelene kakade ngalokhu ngokwabo.
Amadoda adumile angu-16 anesithunzi esikhulu
Umuthi womndeni "wegolide" we-Trump
Izimfihlo ezishaqisayo zabamdemoni: izinkanyezi ezingu-29, ezenzelwe ubudlova ngokocansi
Amaqiniso angu-15 okudingeka ukwazi ngoMegan Markle - iNkosana entsha ethandekayo uHarry
Khona-ke manje: Ingabe amaqhawe okukhangisa kwakho okuthandayo akhulile?
Izinhlobo ezingu-15 zezilwane ezibizwa ngezinkanyezi
Ukuqhubeka kulandela: izakhamuzi zaseRussia ziyaqhubeka zihlangana namawele wezinkanyezi!
Lezi zihloko ezingu-30 zama-albhamu abaculi baseSoviet zizokulethela izinyembezi!
7 abahlonishwayo, umsebenzi wabo owawa ngenxa yezigameko zokuhlukunyezwa ngokocansi
Izinyoni ezingu-10 ezidume kakhulu emlandweni we-cinema
Imfihlo yokubukeka okungenakuqhathaniswa kuka Kate Kate ngemuva kokuzalwa kwesithathu kwembulwe!
Shock! Nakhu okwenzeka kubalingisi be-movie "Twilight"
Abalingisi abangu-12 abafakwe ezinkampanini ezidumile, ekubeni "isikhundla esithakazelisayo"
I-Pattern "Spider" enezinaliti
Isikrini se-sun for face kusuka ezindala
I-Atrophy ye-mucosa yesisu
Dresses Natalie Portman's
Ukuhlobisa igumbi lomntwana
UKristen Stewart wavuma ukuthi akayithandi intsha yakhe
UTor Cruise waphuka umlenze wakhe kwiqoqo lefilimu ethi "Mission: Impossible 6"
Okuqukethwe kwekhalori yamaswidi
Amafutha e-Castor for growth eyelash
Kusihlwa kusigqoke nge-corset - isigqoko sigxile!
Isisindo somsana ngesonto - itafula
Uma umuntu engabizi
Isinaphi sokukhula kwezinwele - izindlela ezinhle kakhulu zokusebenzisa nokusebenza
I-hypererextension - inqubo yokusebenza
"Taboo" evela eBetleon beetle
Ukhukhamba e-Adjika ebusika - zokupheka ze-billet ezingavamile futhi ezihlwabusayo kakhulu